Fa maninona no manafika ny alika? | Tontolo alika
Fa maninona ny alika no manafika
Monica Sanchez | | Training, curiosities
Fa maninona no manafika ny alika? Fanontaniana maro no anontanian'ny olona ny tenany rehefa mahita ny sakaizany tampoka mahery setra na manafika olon-tiana iray izy ireo. Ary ny mba hahasoa ny rehetra ny fiaraha-miaina dia zava-dehibe tokoa ny fanokanan'ny olombelona fotoana hahafantarana ny fitenin'ireo biby mipetraka ao an-trano, satria izany no ataony amintsika isan'andro.
Ka raha te hahalala ny valin'io fanontaniana io ianao dia hiresaka maharitra momba izany isika.
1 Fa maninona no manafika izy ireo?
2 Ahoana no ahafantaranao raha hanafika izy ireo?
3 Azo sorohana ve ny fanafihana?
Fa maninona no manafika izy ireo?
Mety hanafika ny alika noho ny antony maro:
fanaintainana: rehefa mahatsapa fanaintainana amin'ny faritra rehetra amin'ny vatany izy ireo ary mikasika azy ireo eo amin'io faritra saro-pady io dia afaka manafika antsika izy ireo.
Reny voajanaharyNy bitika izay lasa reny dia afaka miaro be raha manandrana mamandrika na misambotra alika kely isika.
Miaro: na noho ny fanararaotana azy ireo na noho ny fahatsapany fa miankina amin'izany ny fiainany.
Territory: Tsy hoe biby faritany be dia be izy ireo (mazava ho azy fa tsy betsaka noho ny saka), fa mahita hatrany ianao izay tsy mahazaka alika vaovao ao an-tranony.
sakafo: ho an'ny zava-manan'aina rehetra dia zava-dehibe tokoa ny mihinana, na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba hafa. Raha ny alika, raha manana ahiahy izy ireo na iharan'ny antsojay rehefa misakafo, dia misy ny mety hanafihana azy ireo raha manelingelina azy ireo na raha manandrana manala ny feeder ianao, zavatra iray izay TSY tokony hatao. Tsy misy amintsika te-hoentina rehefa eo am-pisakafoana izahay.
over-fiarovana:, ohatra, rehefa miaro olona be loatra ny alika ary koa tsy nanokana fotoana be dia be ho an'ny fampiofanana, vao nomeny sakafo sy fitiavana. Olona iray hafa mety hiafara amin'ny hanaikitra ny alika rehefa manandrana hanakaiky azy.
-piaraha-monina pobre: ny alika manomboka amin'ny 2 ka hatramin'ny 3 volana dia tsy maintsy misy alika, saka ary olona hafa ka rahampitso rehefa olon-dehibe izy ireo dia hainy ny miaraka aminy. Fa raha tsy mitranga izany, raha vao lehibe izy ireo dia mety ho mahery setra.
Ahoana no ahafantaranao raha hanafika izy ireo?
Ny alika dia biby milamina amin'ny natiora, ny zavatra voalohany hataon'izy ireo dia ny "mampitandrina" fa mahatsapa sorena sy / na henjana izy ireo. Ahoana no hataon'izy ireo? Mihetsiketsika, mibanjina, mampiseho nify, mibontsina ny volom-borona amin'ny lamosiny sy ny rambony, ary / na mandeha lavitra aza ny inona na ireo tsy miraharaha ireo hafatra rehetra ireo.
Tokony ho fantatrao fa mampitandrina foana izy ireo. Ny fisian'ny ray aman-dreny milaza fa ny alikany dia nanafika ny zanany "tsy misy antony" ... dia tokony hampisaintsaina antsika. Amin'ireny toe-javatra ireny dia tsara ny manontany tena hoe inona no nataon'ilay zaza tamin'ireo biby, ary raha nifanerasera tsara ireo voalaza etsy ambony ireo fony izy ireo alika kely. Fa maninona aho no miteny an'izany? Satria inoana fa ny alika dia azo sintomina amin'ny rambony ary mampiraikitra ny rantsan-tànany amin'ny masony sy / na orony toy ny tsinontsinona, fa fahadisoana lehibe tokoa io.
Ny fiaraha-miaina tsara dia mandalo amin'ny fanajana ny alika. Raha tsy misy ny fanajana dia mety hisy ny fanafihana.
Azo sorohana ve ny fanafihana?
Mazava ho azy eny. Ary noho izany dia manoro hevitra aho ny hanao izao manaraka izao:
Araraoty ny alika kely alika kely. eto manazava ny fomba fanaovana azy.
Ento mivoaka an-tongotra sy manao fanatanjahan-tena isan'andro izy ireo, intelo / isan'andro farafahakeliny.
Ento any amin'ny mpitsabo biby izy ireo isaky ny mila izany, indrindra raha miahiahy isika fa marary izy ireo.
Raiso am-panajana sy faharetana ary fitiavana izy ireo. Aza mampijaly azy ireo.
Fantaro ny fitenin'ny vatanao mba hifandraisana amin'izy ireo tsara kokoa.
Manantena aho fa nahasoa anao ity lahatsoratra ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » curiosities » Fa maninona ny alika no manafika
Ahoana ny fiarahaban'ny alika
Ahoana ny fampidirana alika faharoa ao an-trano